DEG-DEG: Diyaarad ay leedahay Itoobiya Oo Burburtay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Mar 10, 2019 273 0
Mid kamid ah diyaaradaha duulimaadka ee dowladda Itoobiya ayaa burburtay, taas oo ay saarnaayeen inkabadan boqol ruux oo rakaab ah.
Diyaaradda burburtay ayaa ka duushey magaalada Adis-Ababa ee caasimadda Itoobiya, nooceeduna wuxuu ahaa Boeing 737, waxayna kusii jeeday magaalada Nairoobi ee caasimadda wadanka Kenya.
Waxaa saarnaa ugu yaraan 149 rakaab iyo 8 ruux oo kamid ah shaqaalaha diyaaradda, iyadoona Raadaarka lagala socda dhaq-dhaqaaqa diyaaradaha laga waayay 6 daqiiqo kadib markii ay duushey.
Xafiiska Ra’iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa xaqiijiyay burburka diyaaradan, waxaana Abey Axmed uu tacsi u diray guud ahaan shacabka Itoobiya, gaar ahaan ehellada ay dadkooda saarnaayeen diyaaradda burburtay.
Lama oga goobta ay ku burburtay diyaaradan ay dadka badan saarnaayeen, iyo sababaha keeney burburkeeda, waxaana socda baaritaanno lagu baadi goobayo, kaas oo ay ka qeybgalayaan laamaha kala duwan ee dowladda xabashida Itoobiya.
Itoobiya waxaa kumanaan askari ka jooga dalka Soomaaliya, iyagoo ka geysanaya dhibaatooyin iyo tacadiyaad farabadan oo ka dhan ah dadka Soomaaliyeed, waxaana colaad fog oo salka ku heysa islaam naceybka u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah.